Muxuu ka yiri Tababare Solskjær kulanka ay caawa Barcelona kula ciyaari doonaan Cump Nou??? – Gool FM
(Yurub) 16 Abriil 2019. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ugu baaqay ciyaartoyda Red Devils inay ka faa’idaystaan ​​fursadaha gooldhalineed ay ku helayaan Barcelona.
Barcelona ayaa caawa ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Cump Nou kooxda Manchester United, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta 2-aad wareega siddeed dhamaadka ee tartanka UEFA Champions League.
Fursada ay ku dooneyso kooxda Manchester United inay ugu soo baxdo kulanka caawa wareega afar dhamaadka ee tartanka UEFA Champions League ayaa u muuqata inay tahay shaqo aad u adag, maadaama ay caawa marti ku noqonayaan garoonka Cump Nou.
Hadaba 46 jirka leyliya kooxda Manchester United ayaa wuxuu dardaaran u diray ciyaartoyda Red Devils, shir jaraa’id uu kasoo muuqday, kahor kulanka caawa ka dhici doono garoonka Cump Nou.
“Waan ognahay inaan natiijada ciyaarta u dhigi karno dhinaca kale, lakiin Barcelona oo ku ciyaareysa Camp Nou waa mid gaar ah”.
“Waxaan helnay fursado fiican todobaadkii hore, balse waan hubaa in sidoo kale kulanka soo aadan aan abuuri doono fursado, isla markaana aan halis ku noqon doono goolkooda, balse muhiimada ayaa waxay tahay inaan ka faa’ideysano fursadahaas”.
Madaxweynaha Barcelona oo ugu dambeyntii ka hadlay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo Antoine Griezmann